MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA PITSKY IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka eeyga Pitsky iyo Sawiro
American Pit Bull Terrier / Siberian Husky ama Alaskan Husky ey isku dhafan oo isku dhafan
Lugz Pit Bull / Husky mix at 10 bilood jir. 'Kani waa Lugz oo toban bilood jira Siberia Husky oo wata buluug Pit Bull. Labada waalidba waa asal ahaan. Wuxuu culeyskiisu yahay 62 rodol oo leh qoorta 22 inji iyo 21 inji oo madax ah. Lugz sidoo kale marar dhif ah wuu qayliyaa, wuu jecel yahay carruurta, weligiis ma qaniinin oo wuxuu si fiican ula ciyaaraa eeyo kale oo nooc kasta leh. Isagu waa dhegeyste aad u wanaagsan oo aan la yaabin. Wuxuu qabtaa shaqo aad u wanaagsan oo uu ku ilaaliyo guriga. Wuxuu jecel yahay inuu ceyrsado deerada wuxuuna ku ordaa xawaare aad u sareeya oo masaafo dheer ah. Wuxuu jecel yahay qabowga umana hayo kuleylka. Wuxuu ubaahanyahay uguyaraan 2 saacadood oo ciyaar ah maalin kasta si looga ilaaliyo inuu helo rabitaanka qodista. Wuxuu jecel yahay hilib cas oo cusub.
shaybaarka madow iyo isku darka shaybaarka jaalaha ah
Pitsky ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Godka Dibida Maraykanka iyo Siberia Husky ama Alaskan Husky . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Siren ka Siberian Husky / Pit Bull Terrier mix (Pitsky) eey yar oo jirta 4 bilood
Neeko Siberian Husky / Pit Bull Terrier mix (Pitsky) oo jira 1 sano iyo bar. 'Neeko waa dayactir aad u sareeya marwalba wuxuu doonayaa nooc ka mid ah dareenka iyo rabitaanka guriga burburiyo haddii keligaa laga tago wax ka badan dhowr daqiiqo. Badanaa isagu waa mid deggan oo waligiis dagaal badan aan ahayn inta lagu jiro ciyaarta. Wuxuu culeyskiisu yahay 80 rodol wuxuuna cabiraa 45 inji sanka ilaa dabada. '
Neeko Siberian Husky / Pit Bull Terrier mix (Pitsky) oo jira 1 sano iyo bar
Jaxx iskudhafka buluuga ah ee Siberian Husky / Pit Bull Terrier mix (Pitsky) at 3 sano— Waxaan la kulanay Jaxx iyadoo loo marayo Craigslist. Runtii wuu xor ahaa, markaa shaki ayaan qabnay. Markii aan la kulanay waalidkiis waxaan si dhakhso leh u ogaanay in ay xirxirayaan oo ay u socdaan Waqooyiga fursad shaqo oo cusub. Waxaan si dhakhso leh uga jawaabnay dhajinta, waxaanna u dhaqaaqnay gurigooda isla markii aan ka baxnay taleefanka. Markii Jaxx la keenay guriga, wuxuu u sameeyay saaxiibkiis saaxiibkiis. Waxay ahayd dammaanad aan la is barbardhigi karin tan iyo tan! Jaxx waa cadho weyn, marka laga reebo u janjeera mararka qaarkood inuu ku farxo oo uu dadka ku boodo. Wuxuu si wanaagsan ula dhaqmay eeyaha kale, xitaa kuwa yaryar, wuxuuna jecel yahay la dhaqanka bulshada eeyaha, carruurta, iyo dadka waaweyn. Wuxuu si aad ah ula shaqeeyaa bisadeena, oo aan helnay waxyar kadib Jaxx. Jaxx wuxuu leeyahay muuqaal caato ah, muruq leh, timahiisuna waa kuwa dabiici ah. Wuxuu u eg yahay inuu wax cuno maalintii oo dhan, laakiin kama badna inuu ku qanco. Ma qayliyo, in la waydiiyo mooyee inuu hadlo, oo sidaasuu ahaa sanduuq tababaran markii aan soo dhaweynay. Wuxuu jecel yahay alaabta uu ku ciyaaro, wax badanna wuu leeyahay! Jaxx dhab ahaantii si kadis ah ayaa looga soo saaray waxa qoyskiisu noo sheegeen. Hooyadiis, Predbred Pit, ayaa ka qoday santuuqa banaanka hoostiisa mid ka mid ah dariska halkaasoo aabbe Jaxx, oo ah nin nadiif ah oo Husky ah uu ku sugayay. Hooyadiis dhimatay kadib markay umushay . Waxaan aaminsanahay inay jireen seddex Ey oo kaliya oo badbaaday. Waa wax aad u murugo badan, laakiin nasiib ayaan u leenahay inaan isaga helno! '
Jaxx iskudhafka buluuga ah ee Siberian Husky / Pit Bull Terrier mix (Pitsky) at 3 sano jir sariirta sariirta
c qaybta qiimaha eeyaha
'Kani waa sawir aan ka qaaday isku dhafka' Siberian Husky / Pull Bull 'oo 8 bilood jir ah, Molly. Molly waxay ahayd eey hoy ah oo aan badbaadinay markay ahayd qiyaastii 3 bilood. Iyadu waa xishood yar tahay / isxigxigasho marka ugu horreysa ee ay dadka la kulanto, laakiin si dhakhso leh ayey u kululaataa. Eeyaha, si kastaba ha noqotee, iyadu si toos ah ayey u tahay saaxiibkooda ugu fiican. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto eyda kale. Molly waxay leedahay wax aad u badan kacsan / cadho firfircoon . Waxay socon kartaa saacado iyadoo wali wax walba diyaar u tahay. Qalabka ay ku ciyaarto ee ay jeceshahay waa nooc kasta oo ul ah waxayna jeceshahay inay ulaha soo qaadato ama u booddo haddii aad kor u taagto. In muddo ah, ma ciyi lahayd, laakiin hadda waxay la hadlaysaa wakhti kasta oo ay rabto feejignaan. Hal quirk qurux badan oo ay leedahay waa sida ay tahay ciyoon , in kastoo. Waxay u egtahay inay tahay inay ka shaqeyso iyada oo ay sameyn doonto cabaqyadan yaryar ee hunguriga leh. Ilaa iyo inta caadooyinka xun ay tagaan, iyadu waa qodayaal. Waxay kaloo jeceshahay inay wax badan calaashado oo badankoodna calalinta alaabta lagu ciyaaro saacado gudahood ayay ku ilmaysaa. Kaliya maahan inay jimicsi badan hesho laakiin iyadu wax badan ayey iyaduna u baahan tahay. Isku soo wada duuboo, Molly waa eey weyn iyo gacaliso noocan oo kale ah. Weligay ma isticmaalin Bark Busters iyo intii aan daawaday dhawr qaybood oo Ey Whisperer ah, laakiin waligay uma isticmaalin falsafaddiisa inaan ku tababaro Molly.
Bella the Pit Bull / Husky mix puppy at 2 bilood jir— 'Tani waa Bella, isku darkayaga' Husky / Pit '. Waxay hadda qiyaastii tahay 2 bilood. Iyadu waa eey cajiib ah. Aad u caqli badan oo qurux badan sida aad sawirada ku garan karto! Waxaan si adag u aaminsanahay in mutte / isku dhafka ay yihiin eeyo ka fiican ka dibna la kariyey iyaduna kama duwana. Iyadu waa caqli badan tahay oo ciyaar badan.
lhasa apso terrier mix puppy
Bella the Pit Bull / Husky mix puppy at 2 bilood jir
Eeg tusaalooyin badan oo Pitsky ah
Sawirada Eeyaha Pitsky 1
Sawirada Eyga Pitsky 2
Liistada Ey Doofaarka Bull Isku Darka Eeyaha
sawirada iskudhafka pitbull husky
boston terrier jack russell mix puppy ee iib ah
bulldog american ah oo lagu qasay ingiriiska bulldog
cawl iyo cows yar oo husky ah
buluug yar oo bulind puindle puppy puppy